Zeziphi izichazi ezinokuthi zichaze (zenze) umlinganiswa, indoda? | Ulwazi oluluncedo lomntu wonke.
Iziphi izichazi ezingachaza (zibonisa) umntu, indoda?
Isimo sendoda singenziwa ngohlobo lwee-epithets, ezithandekayo njenge:
Isimo esihle: unothando, upholile, ulunge kakhulu, womelele, umhle, unesibindi, unesidima, uziphathe kakuhle, ulungile, ulungile.
Ukungafaneleki: ikratshi, ukuzingca, ubudenge, ubuthathaka, ukubawa, ukubawa, ukungeva, ubungqola, ubuvila.
Isimo esihle: Unobuqili, unyanisekile, uyinyani, unentembeko, uzimisele, uzimisele, unesibindi, unesibindi, ulungelelene, uzolile, unobushushu, unobubele, unesisa, uziphethe kakuhle, uyakhalaza ethambile, ongakhathalelwanga ntweni, ogqibeleleyo, ovelwano, onenceba, ochwayithileyo, onobuchule
ukungafaneleki: ukubhuqa, ukukhukhumalisa, ubuqhetseba, ubuqhetseba, inkohliso, ubuqhetseba, ubuqhetseba, ukungakhuseleki, ukukhohlisa, ukuziqhatha, ubushushu msinya, ububi, ulunya, ukuphinga, ukubawa. krwada, ukubawa, ubuqhetseba, isidima, isidima
Indoda inokubonakaliswa linani elikhulu lezichazi, into ephambili kukuba kukho ezinye ezakhayo. Umzekelo: unothando, unenkathalo, ulungile, womelele, ulukhuni, unesibindi, unqabile, ulumkile, unonophele. Okanye: yingozi, krwada, ibuthathaka, iyabulala, ayiphathi kakuhle, ikhukhumale, ikrexe.
Iimpawu ezifanelekileyo: zintle, zinomtsalane, zigqwesile, zilumkile, zikhuselekile, zinenjongo;Iyakwazi, icocekile, iyahlekisa.
Iimpawu ezimbi: uthando, ukuzingca, ukungakhathali, uburharha, irhabaxa, ukungafundiswath, ongafundanga.
Indoda ukuya kwindoda, kodwa nangayiphi na imeko, amadoda amaninzi aya kuzithanda ezi zihlomelo zilandelayo:
eyakhayo-eyomeleleyo, elumkileyo, entle, enesidima, enesibindi, othandekayo, onothando, onobuntu, onesiphene, unonophele, unonophele, unyanisekile, uthembekile, unembeko, unothando kwaye ulungelelene.
Bendingafuni ukuva iziqhulo ezinje ngolu hlobo: krwada, krwada, buthathaka, ngenabukrwada, ngobuqhetseba, ukungabikho zingqondweni, sisidenge, ndithetha nje, ndinomsindo, sinekratshi, sisithukuthezi, sinobuthathaka.
Iziphawuli zokubonisa amadoda: elungileyo, embi, ivila, ukusebenza nzima, inkalipho, ukubawa, ubuntu, umsindo, unonophele, rhabaxa, rhabaxa, thanda, unesidima, unamandla, buthathaka, smart, silumko.
Onke amadoda ahlukile, kodwa uninzi lwazo kufuneka luthande ezi zihlomelo zilandelayo:
yomelele, inobukrelekrele, ithembekile, intle, isebenza nzima, iyahlekisa, inesidima, inobumnene.
Kwaye kwezi zilandelayo zichazayo:
ukhohlakele, ubawa, umvuzo omncinci, igwala, izidenge, ukuzithemba, ubuthathaka.
Indoda okanye indoda, ngokoluvo lwam, inokuboniswa ngoncedo lweziphawuli ezichaza iimpawu ezintle zomlingiswa, ukubonakala, indlela yokuziphatha, iimpawu zeshishini, isimo sengqondo kwabasetyhini:
oqondayo, onobuqili, oqondayo, oqondayo, onobuqili, onobukrelekrele, onobukroti, onwabileyo, onobukroti, onobukroti, onobukroti, onwabile unesisa, ucocekile, ucocekile, unesidima.
Igama elithi & quot; Andibandakanyi, kuba le yingcamango enikezwe nguThixo. Ubuhle buhlala bunxulunyaniswa nobume kunye neempawu ezintle, ngombono wam.
Kwaye ngezi zihlomelo ndibonakalisa iimpawu ezimbi zomntu, ubuntu, umgangatho wendoda:
umntu osisidenge, ongenabubi, ongenabubi, ongenakuqonda, okhathalayo, okhathalayo, okhathazayo, onobubi, onoburharha, obenoburharha, obenoburharha, okhukhumeleyo, okrwada, obalulekileyo ukungazi, ukungakhathali, ukungcungcutheka, ukungcola, ukuzilungisa.
Ukomelela, umonde, ukuzola, ububele, inkalipho, isibindi, uthando, ukuzibamba, ubumnene, ukuqonda, ubukhali, isidima, isidima, ukusebenza nzima, uqoqosho, unonophele, unonophele, ulungile, unothando, uyakholelwa, unesidima, unothando.
Abangafundanga, abakrwada, ababuthathaka, abanobugwala, abanomsindo, abanobushushu msinya, abangakhathaliyo, abarhanqayo, abangafundanga, abanekratshi, abazingcayo, abangakholwayo.
Amadoda, njengabafazi, ayathanda ukufumana izincomo, ngakumbi kubameli ababhinqileyo.
inokuthenjwa, yomelele, inomdla, inesibindi, inesibindi, ezimeleyo, ezoqoqosho, inesidima, ikrelekrele, inesidima, inembeko, intembeko, othandekayo, umangalisayo, onyanisekileyo, onobugorha, onobukrelekrele, onoxanduva, olungileyo.
amavila, abuthathaka, abathobekileyo, abanobuthathaka, oothanda ukulwa, abathobekileyo, abantamo, abangahlelwanga, abakhohlakeleyo, abaqhushumbe, oothunywashe.
Imibuzo ye-20 kwiziko ledatha eliveliswe kwimizuzwana ye-0,321.